“Waxaanan Iloobayn Dadkayagii Sabab La’aanta Lagu Laynayay Iyo 280 Xabaal Wadareed” | Salaan Media
“Bulshada Caalamka Garnaqsiga inaga dhexeeya waa Qiraalka Jiritaankayaga iyo Ixtiraamka Rabitaanka Shacabkayaga”
“Dadka Somaliland Ma aha Kuwo Cuqdad qaba, Waxay Ogyihiin inay Dawladii Xasuuqday ay Gantooda ku dumiyeen”
HARGEYSA (SM)-Wasiirka Madaxtooyadda Somaliland Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan, ayaa sheegay in shacbiga Somaliland aanay ahayd dad cuqdad qaba, balse ay ogyihiin in dawladii xasuuqday ay gacantooda ku dumiyeen.
Wasiirku waxa sidaasi ku sheegay qoraal lagu daabacay mareegtiisa Internet-ka ee guusha.com, waxaanu hadalkan ka jeediyay xaflad lagu soo bandhigayay buug laga qoray tahriibka oo maanta lagu qabtay Huteelka Summer Time ee caasimadda Hargeysa.
Wasiirku waxa uu sheegay in Somaliland ay madax-banaanidii ay heleen 53 sanadood muddo laga joogo oo ku sinayd 26-kii Bishii June 1960-kii ay shan maalmood ka dib u lumiyeen wax uu ugu yeedhay niyad sami iyo walaal jacayl, isagoo arrintaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “26June, Waxay ahayd maalin qiimo wayn Inagu lahayd, balse aan niyad sami iyo walaalnimo is huwan degdegna ku lamaan yahay aan ugu ridnay ceelkii loogu magac daray Midnimada Somalia!!. Ciidankii loogu tallo galay in ay Cadaw naga Caabiyaan ayaa Caruurtayadii Curyaamiye.
Qaladkaas dhacay Wuxuu sababay in Shacabka reer Somaliland ay dib u galaan Gumaysi dadban oo ka xanuun badan kii hore,balse Mudo kadib yar iyo waynba intay dib u kulmeen ayey ku fikireen in ay dib u soo ceshadaan xoriyadoodi ay marka horeba lahayeen. Bulshada caalamka garnaqsiga inaga dhexeeya waa hal mid “Qiraalka Jiritaankayaga iyo Ixtiraamka Rabitaanka Shacabkayaga,” “Existence Recognition.”
Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu fasiray marxaladihii ay Somaliland soo mudatay nus-qarni dhan, waxaanu yidhi “Jiritaanka iyo Madaxbanaanida Somaliland maaha mid ku timid qiiro iyo tiro kooban oo dad ah oo goostay in Somaliland ay goosato, balse jiritaankeena iyo gooni isku-taageenu waa mid cod shacab ku dhisan oo in ka badan 97% ayaa u codeeyey in Somaliland noqoto dal madaxbanaan.
dadka moodaya ama si jilicsan u sheega in dooda u badan ee Somaliland ay tahay waa nala dilay iyo waa nala laayay, waxaan u sheegaynaa in Somaliland shacabkeegu ahayn mid cuqdad qaba oo waa dad ogsoon in Dawladii sidaa ka yeeshay ay gacantooda ku Dumiyeen kana guulaysteen, balse arinku intaa ka sal balaadhan yahay oo uu yahay rabitaan iyo doonitaan shacab.”
Wasiirku wuxuu sheegay inaanu iloobayn dadkii sabab la’aanta loo leynayay 280 xabaalo wadareed. Isagoo arrintaas sharxayayna waxa uu yidhi “Wali waxaanan ilaawi karin dadkayagii masakiinta ahaa ee bilaa sabab loo laayey. Waxaanaan ilaawi karin 280 Xabaalo wadareedyo “Mass Graves” ee ay ku aasan yihiin dadkayagii reer Somaliland, Waxaanaan ilaawayn madaxdayadii bilaa sabab loo xidhay loona laayey. Waxaanaan ilaawayn Xoriyadii nalaga qaaday ee 3 galabnimo nala xarayn jiray. Waxaanan ilaawayn diyaaradihii intay Hargeisa ka kacaan hadana dib u garaacayey isla markaana ku wadayey ilaa ay maxasta iyo ubadku ka talaabayaan xadka.”
“Dadka dhacdooyinkaas wali u haysta wax sahlan ama Caadifad waxaan leenahay waa khalad labaad oo aad ka galaysaan Shacabka Reer Somaliland,”ayuu yidhi Wasiir Xirsi.